Chii Chinotsvaga Enginjini Verenga ... Martech Zone
Svondo, Kukadzi 3, 2008 China, Gumiguru 29, 2015 Douglas Karr
Tsvaga injini indekisi mapeji ane akaomesesa algorithms anorema toni yemhando dzakasiyana, zvese zvemukati nekunze kune peji rako. Ini ndinofunga zvakakosha kuti uzive kuti ndezvipi zvinhu zvakakosha zvinoteererwa neInjini dzekutsvaga, zvakadaro. Mazhinji acho zvinhu zvaunogona kudzora paunenge uchironga kana kugadzira yako saiti kana kungonyora peji rako. Izvi hazvinei zvisinei nekuti ndeye chaiyo yekushambadzira webhusaiti webhusaiti, blog, kana chero imwe saiti.
Makiyi Ezvinhu zveKutsvaga Injini Kugonesa
Pamberi peSEO vakomana vakaverenga bhurogu yangu kundibvarura - ini ndinokanda chirevo kunze uko… ichi chinongova chikamu cheicho nyanzvi yeSEO yaizoteerera kana ichiongorora nekutora yako saiti. Iko kune, zvechokwadi, zvimwe zvinhu senge meta tag, Kuiswa kweHTML, uye saiti mukurumbira. Pfungwa yangu ndeye kungoita wepakati webhusaiti anovandudza kana muridzi webhizinesi azive zvimwe zvakakosha izvo zvinogona kuchinjika zviri nyore.
The zita remapeji ako zvinokanganisa mashandiro akaita peji racho. Ive neshuwa yekushandisa akakosha mune rako peji zita uye isa yako blog kana saiti zita rechipiri.
Your inotongwa zita zvinokanganisa kuiswa kwako. Kana iwe uchida kuiswa kwepamusoro kwemamwe mazwi akakosha kana mitsara, funga nezve kuasanganisa iwo muzita rako rezita.
Tumira slugs dzakakosha uye dzinogona kushandiswa kuwedzera mazwi akakosha nemitsara. Ini ndinoedza kushandisa musoro unogombedzera unokwezva muverengi asi yangu post slugs inowanzo shandurwa kune dzekutsvaga injini.
The musoro mukuru (h1) ye peji rako inorema kwazvo mukati mezviri mukati mainjini dzekutsvaga ari kunongedzera. Iko kukwirira (est) kuiswa mumuviri muHTML kunokanganisawo indexing.
Sezvakaita nemusoro mukuru, a musoro wenyaya (h2) ichaitawo kunongedza kweiyo peji.
The zita repositi yako, kana mamwe madiki misoro anokanganisa kuti ndeapi mazwi akakosha nemitsara yakanyorerwa uye sei zvakanaka.
Kudzokorora mazwi akakosha uye mitsara yakakosha mukati mezvakakosha zvakakosha. Aya mazwi akakosha nemitsara yakakosha inofanirwa kuongororwa kuti aone kana ari mazwi akakosha uye mitsara yakakosha ingangodaro yakatsvaga.
Mamwe mazwi akakosha uye mitsara yakakosha inobatsira zvakare.
zvakawedzerwa misoro (h3) zvakare inobatsira uye inogona kuyera kupfuura mamwe mazwi mukati meiyo peji yezvinyorwa.
Kushandisa mitsara uye mazwi akakosha mukati me anchor tag (batanidzo), iri zvakare nzira huru yekutyaira kiyi yakakosha uye keyphrase indexing pane peji. Usatambise chinhu chakakosha ichi pa "tinya pano" kana "chinongedzo"… asi, shandisa musoro wenyaya uye zvinyorwa kunyatso kufambisa hukama pakati pechirungiso nemitsara yakakosha Semuenzaniso, kana ini ndichida dura rangu rine chekuita nekutengesa uye tekinoroji, ini ndoda kuve nechokwadi chekushandisa:
Sezvakangoita chinongedzo chinobatanidza, kusanganisa ma tag emusoro mune zvinongedzo zvemifananidzo zvinobatsira zvakare. Sezvo injini dzekutsvaga dzisingakwanise kunongedza zviri mukati memufananidzo (zvakadaro), kuwedzera zita-rakatakura zita kunobatsira zvakanyanya - kunyanya kana mumwe munhu achingoshandisa Kutsvaga kweMifananidzo kweGoogle.
Mazita emifananidzo zvakakosha. Ive neshuwa yekushandisa marashi uye kwete kusimbisa pakati pemashoko ari mumufananidzo. Uye uve nechokwadi chekuti zita remufananidzo rinowirirana nemufananidzo ... kuyedza kuisa mazwi akakosha mumufananidzo usinga kanganise kunogona kukuvadza kupfuura kubatsira.
Tags: anchor taganchor tag zvinyorwaanchor textinotongwa zitah1 tagh2 tagh3 tagmusoromufananidzozita remufananidzomitsara yakakoshakushandiswa kweshokomazwi akadzamapeji pejitumira slugszita rekutumiramisoromusoro wepeji
Kunze kwekuti kana iwe wakanangisa zvisirizvo zvisirizvo zvirevo kutanga nazvo, hazvina basa, ndinofunga une zvizhinji zvacho.
Feb 4, 2008 at 11:08 PM
Nabbed! Iwo mazwi akakosha andakasarudza aive akaomarara kune anoonekwa, SEO!
Kuziva SEO uye kuitsanangura mumatanho emunhu mhuka mbiri dzakasiyana. Edza nepandinogona napo, ndinowana kumwe kushamisika kutaridzika pandinoedza nepandinogona napo kutsanangura zvinotsvaga injini dzekutsvaga, kuti kubatana kwakakosha sei, uye nei mazita emapeji achikosha. Iri ibasa rangu kuratidza iwo mazano nenzira ipfupi, iri nyore kunzwisisa. Iyi posvo inondibatsira zvakanyanya. Basa rakanaka.
Feb 4, 2008 at 11:09 PM
Ndatenda, Dhani! Chave chiri simba kwandiri uye ndinoramba ndichiedza kuchigadzirisa. Ini ndinofunga ndiri nani pachangu, kunyanya nekuti ndinogona kududzira kutaridzika kwekutambudzika kwevanhu vandiri kutaura navo.